स्कूलमा मेरो बच्चा दर्ता | USAHello | USAHello
संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्कूल आफ्नो बच्चा सुरु गर्न तपाईँले पहिले विद्यार्थी आफ्नो बच्चा दर्ता हुनुपर्छ. यो त स्कूल आफ्नो बच्चा स्वीकार गर्न सक्छन् स्कूल कागजात भ्रमण र साइन इन गर्न आवश्यक अर्थ. तपाईं आवश्यक कागजात र स्कूलमा आफ्नो बच्चा कसरी दर्ता गर्न के सिक्न. नियुक्ति र विशेष कक्षाहरू पढ्न. के तपाईंको बच्चाको आवश्यकता पढ्न, के तपाईंको बच्चाको अनुपस्थित छ भने, र विद्यालय प्राप्त गर्न कसरी.
के स्कूल मेरो बच्चा जानेछन्?
वर्ष आफ्नो बच्चा जन्मेको र बाँच्न ठाउँ छोराछोरीलाई जानेछन् जो स्कूल निर्धारण गर्नेछ. आफ्नो स्थानीय सार्वजनिक विद्यालय फेला.
के कागजी कार्रवाई म स्कूलमा मेरो बच्चाहरु दर्ता गर्नुपर्छ?
आवश्यक कागजी कार्रवाई समावेश हुन सक्छ:
स्कूल जिल्ला निवास प्रमाण. यो के तपाईं आफ्नो घर वा अपार्टमेन्ट बस्ने भनी देखाउने छ मतलब. निवास प्रमाण को उदाहरण एक हस्ताक्षर अपार्टमेन्ट पट्टा, बैंक विवरण, वा ठेगाना संग एक उपयोगिता बिल. यो कहाँ स्कूल बच्चाहरु enrolls तपाईं एक छिमेकी मा छोड्नु भनेर देखाउनु हो.
उमेर प्रमाण. जस्तै, एक जन्म प्रमाणपत्र वा राहदानी आफ्नो बच्चाको जन्मदिन संग.
प्रतिरक्षक वा अन्य स्वास्थ्य रेकर्ड.
स्कूल जिल्ला पूर्णतया भर्ना विद्यार्थीलाई प्राप्त गर्न स्कूल प्रशासकहरूलाई एक बैठक आवश्यक हुन सक्छ.
तपाईं स्कूलमा आफ्नो बच्चा दर्ता गर्दा प्रत्येक स्कूल जिल्ला यसको आफ्नै फारम हुन सक्छ. स्कूल जिल्ला वेबसाइटमा फारम फेला. तपाईं पनि स्कूल जाने र स्कूल सचिव कुरा अनुरोध गर्न सक्छ.
जब म स्कूलमा मेरो बच्चा दर्ता गर्छन्?
अमेरिकामा सबैभन्दा विद्यालयले गर्मी वा प्रारम्भिक गिरावट को अन्त मा सुरु, अगस्ट वा सेप्टेम्बरमा. तपाईं गर्मी मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा आइपुग्दा भने, तपाईं कसरी भर्ना गर्न सिक्न जुलाई वा अगस्ट मा आफ्नो बच्चाको विद्यालय भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं स्कूल वर्षमा संयुक्त राज्य अमेरिका मा आइपुग्दा भने, तपाईं सकेसम्म आफ्नो बच्चा भर्ना गर्नुपर्छ.
मेरो छोराछोरी स्कूल जान छैनन्?
विद्यालय उपस्थित छ को उमेर र बीच संयुक्त राज्य अमेरिका मा विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक छ 16. केही राज्य अमेरिका मा, उमेर एक वा दुई वर्ष फरक हुन सक्छ. तिमी सक्छौ आफ्नो राज्य मा वर्ष को उमेर र नम्बर पत्ता.
नियमित उपस्थित आफ्नो विद्यार्थी लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ. विद्यालय उपस्थित ट्रयाक राख्न. आफ्नो विद्यार्थी स्कूल पनि धेरै दिन सम्झना गर्छन यदि तपाईं व्यवस्था संग समस्या मा प्राप्त गर्न सक्छन्. आफ्नो विद्यार्थी धेरै दिन सम्झना गर्न सुरु यदि तपाईं धेरै चेतावनी प्राप्त हुनेछ. सही नम्बर फरक स्कूल जिल्लामा लागि फरक छ.
तपाईं स्कूल देखि हराइरहेका छन् गर्दा अभाव छ. सबैभन्दा विद्यालय छ2absences को प्रकार. को2प्रकार absences र unexcused absences excused छन्.
excused absences उदाहरणहरू
निलम्बन, अस्वीकार्य व्यवहार देखाउन विद्यार्थी विरुद्ध लिएको एक शास्त्रीय कार्य
अधिकृत यातायातका कमी (जस्तै, बस देखाउने छैन भने)
मुख्य देखि अनुमति
काम, यदि एक स्वीकृत सहकारी शिक्षा कार्यक्रम को भाग
अल्पकालीन वा पूर्ण-समय काम मा सहभागिता
स्कूल खेल टीम खेल वा प्रतियोगिता
स्कूल-प्रायोजित क्लब वा गतिविधि विशेष घटना
unexcused absences उदाहरणहरू
अग्रिम स्कूल बताइरहेका बिना विद्यालय छुटेको
छोड्दै (जाँदै छैन) एक वर्ग
स्कूल लेट हुनुको. लेट पनि tardy भनिन्छ भइरहेको. Tardies excused र unexcused गर्न सकिन्छ. Excused tardies excused absences जस्तै सूची छ.
विद्यार्थीलाई सधैं उसले छुटेका सबै काम बनाउने लागि जिम्मेवार छ. तपाईं, वा अभिभावक वा संरक्षकको, स्कूल अभाव को कारण बताउन लागि जिम्मेवार छन्. कार्यालय वा उपस्थिति कार्यालय कल द्वारा स्कूल भन्नुहोस्, वा शिक्षक टिप्पणी लेखन र हस्ताक्षर गरेर, सचिव, वा प्रमुख. तपाईंलाई थाहा छ भने आफ्नो बच्चा समय अगाडि स्कूल सम्झना हुनेछ, यो स्कूल बताउन अघि राम्रो छ. कहिलेकाहीं, अभाव अप्रत्याशित छ. त्यो ठिक छ. बिहान स्कूल वा अर्को दिन कल.
के मेरो छोराछोरी स्कूल चाहिन्छ?
विद्यार्थी सामान्यतया आपूर्ति ल्याउन, वा उपकरण, तिनीहरूलाई स्कूल. स्कूल जिल्ला वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट, वा कक्षा शिक्षक सूची हुनेछ. सूची फरक ग्रेड लागि अलग अलग हुन सक्छन्.
नोटबुक कागज र Pencils वा कलम सामान्यतया आवश्यक. तीन घन्टी बांधन मिसिन वा फोल्डर पकड कागजात पनि उपयोगी छन्.
स्कूल आपूर्ति महंगा प्राप्त गर्न सक्छन्. साधारण कागज, pencils, र कलम काम. तपाईं लोकप्रिय वा fanciest किन्न आवश्यक छैन. कहिलेकाहीं, शिक्षकहरू वा विद्यालय अतिरिक्त आपूर्ति छ र तपाईं चाहिएमा तिनीहरूलाई प्रदान गर्न सक्छन्. विद्यालय वा समुदाय वा धार्मिक संगठन कहिलेकाहीं दिन टाढा स्कूल आपूर्ति. स्कूल आपूर्ति को लागि खोज स्कूल सुरु गर्नुभन्दा पहिले सप्ताह को एक जोडी मदत. स्कूल वर्ष सुरु गर्नु अघि giveaways को सबै भन्दा सही हुनेछ.
कसरी मेरो छोराछोरी स्कूल प्राप्त हुनेछ?
सबैभन्दा स्कूल जिल्लामा विद्यालय प्राप्त गर्न यातायात प्रदान. तपाईं स्कूल नजिक बस्नुहुन्छ भने, स्कूल तपाईं हिंड्न वा बाइक सवारी कि आशा सक्छ. स्कूल जिल्ला वेबसाइट busing र यातायात जानकारी हुनेछ. यो तिमीहरूलाई भन्नेछु जहाँ बस प्रतीक्षा गर्न र के समय बस स्टप मा हुनेछ. यातायात जानकारी बारेमा स्कूल सचिव सम्पर्क.
विद्यालय जिल्लामा यातायात विद्यार्थी सुअवसर विचार, एक विद्यार्थी सही. विद्यार्थी ठीक व्यवहार छैन भने सुअवसर लगिएको गर्न सकिन्छ. स्कूल बस चढेर विद्यालयमा रूपमा नै व्यवहार आवश्यक.
प्रतिरक्षक के हुन्?
प्रतिरक्षक संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु सामान्यतया विद्यालय जान छ गर्न आवश्यक छ कि शट छन्. यी आवश्यकताहरू स्कूल जिल्ला भिन्न. कहिलेकाहीं तिनीहरूले राज्य व्यवस्था गरेर शासन छन्. आफ्नो बच्चा सबै आवश्यक प्रतिरक्षक छ आवश्यक वा तिनीहरूले छैनन् किन एक अधित्याग देखाउन गर्न आवश्यक छ. तिनीहरूले स्कूल सुरु गर्दा प्रतिरक्षक को रेकर्ड एक विद्यार्थी भर्ना लागि सामान्यतया आवश्यक वा.
मेरो बच्चाहरु स्कूलमा के खाने हुनेछ?
सार्वजनिक र निजी विद्यालय प्रत्येक स्कूल दिन छोराछोरीलाई कम लागत वा निःशुल्क लंच प्रस्ताव. यो एक संघ वित्त पोषित राष्ट्रीय विद्यालय खाजा कार्यक्रम भनिन्छ कार्यक्रम छ. एक घर कमाता पैसा को मात्रा एक विद्यार्थी एक मुक्त भोजन प्राप्त गर्न योग्य कि निर्धारण, कम-लागत भोजन, वा न. केही विद्यालय जिल्लामा राष्ट्रिय विद्यालय खाजा कार्यक्रम बारे जानकारी पठाउन घर. थप जानकारीको लागि विद्यालय सचिव सोध्न.
केही विद्यालय यो कार्यक्रम को एक भाग रूपमा नाश्ता प्रदान. केही विद्यालयले सप्ताह लागि कम आय परिवार मा विद्यार्थीहरूलाई खाना प्रदान, स्कूल विश्रामहरू, वा गर्मी छुट्टी. स्कूल सचिव निःशुल्क र कम लंच बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. वा, स्कूल सचिव जसले तपाईंलाई मदत गर्न सक्छ तपाईं व्यक्ति फेला पार्न मद्दत गर्नेछ.
अमेरिका मा सार्वजनिक विद्यालय